Uyenza njani iAdomain Domain kwiWordPress yakho yeWebhu yokuHamba kweCanel
Ukuba isizinda osisebenzisela ukufakwa kwenethiwekhi yakho yeWordPress ayisiyiyo eyona domain iphambili kwiwebhusayithi, kodwa sisongezo kwisizinda, ngekhe usebenzise inkqubo yesiqhelo yokupaka i-domain. Ngenxa yokuba awukwazi ukuxelela i-domain emileyo ukuba iye naphi na ngaphandle kweengcambu ulawulo, kufuneka usebenzise uphawu lweAddon Domains.
Landela la manyathelo ukwenza iAddon Domain kwindawo yakho yokubamba iCanel:
1Ngena kwiwebhusayithi yakho yeCanel. KwiCandelo leMimandla, cofa indawo yeAddon Domains.
Iphepha leMimandla yeAddon liyavela.
MbiniNgenisa igama elitsha ledomeyini ofuna ukulifaka kwimephu yegama elitsha leDomain.
Amanye amasimi, i-Subdomain / igama lomsebenzisi le-FTP kunye noMthombo woXwebhu, fumana indawo yokuhlala ngokuzenzekelayo kwiserver yakho yewebhu; Sukutshintsha ulwazi olwenziwa ngumncedisi wewebhu kwi-Subdomain / FTP Igama lomsebenzisi, njengoko le ndawo icwangcisa igama lomsebenzisi oza kulisebenzisa ukudibanisa xa ufuna ukusebenzisa i-FTP. Oku kuseto olungagungqiyo kwiiAdoma Domains, kwaye akufuneki uzitshintshe.
3Kwintsimi yoXwebhu lweXwebhu, ngenisa indawo yolawulo lwenethiwekhi yakho yeWordPress.
Inani libonisa Yenza iAddon Domain yolwazi ezaliswe.
4Cofa kwi-Domain ukuze ugcine utshintsho lwakho.
Iphepha leAddon Domains liyahlaziya, kwaye indawo yakho entsha ibonakala phantsi kwecandelo leAddon Domains.
minocycline 100 mg philisi
izifinyezo zonyango yonke imihla
Eyona ntsholongwane ilungileyo yosulelo lwamazinyo